“Xal Looma Waayin Khilaafka Lixda Goobood Ee Xeebta” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Xal Looma Waayin Khilaafka Lixda Goobood Ee Xeebta”
Bal aan aragtidayda shaqsi oo ka madhan siyaasad iyo caadifad ba aan ka dhiibto Murranka iyo Khilaaf ka lixda goobood ee degaanka xeebta. Aniga oo qoddob qoddob isku dultaagi doona guud ahaan arinta. Maxaa loo Xayiray Lixda Goobood ?
Cahdigii AHN Madaxweyne Cigaal ayaa goobahan xayiraad la saaray, Xayirraada la saarrayna waxaa sabab u ahayd isla markaana goobahani halkay Maamul ahaan raacayaan, iyo gobbolka ay hoos tagayaan, laakiin arrintu xayiraadu may ahayn in deegaanka laftiisa la isku haysto.
Xaalada Bulshada Degaanka: